युद्धमा चीनसँग हार्छ अमेरिकाः पेन्टागन - Nepal Readers
युद्धमा चीनसँग हार्छ अमेरिकाः पेन्टागन
एकातिर विश्व कोरोनाको लडाईँ लडिरहेको छ भने यसै विषयलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच उत्पन्न भएको तनावले दुई देशबीच लडाईँको सम्भावना देखिएको छ । तर कोरोनाको यो बबन्डरको समयमा अमेरिका र चीनले लडाईँको जोखिम उठाउन सक्छन् ? अमेरिका कोरोनाबाट विश्वमै सर्वाधिक नराम्ररी प्रभावित भएको छ र घरेलू हिंसाको पनि शिकार भएको छ । अमेरिकाका लागि अर्को खराब खबर भनेको आफ्नै रक्षा विभागबाट आएको छ ।
अमेरिकी रक्षा विभाग पेन्टानगको रिपोर्ट अनुसार २०२० मा यदि एसिया प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका–चीनकाबीच तनावको अवस्था पैदा भयो भने यी दुई देशबीच लडाईँ हुनेछ र यो लडाईँमा अमेरिकाले हार खेप्नु पर्नेछ ।
अमेरिकाका कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या १ लाख नाघेको छ र अश्वेत जर्ज फ्लोइडको मृत्युपछिको गृह युद्धले अर्बौ डलरको क्षती भएको छ। तर, अमेरिकी राष्ट्रपति आफ्नो निशाना केबल चीनतर्फ सोझ्याइरहेका छन् । ट्रम्पले पहिले समुद्रमा चीनलाई घेर्ने प्रयास गरे। फेरी यो मुलुकमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाए। संयुक्त राष्ट्र संघमा कोरोनाको विषयमा चीनमाथि अनुसन्धान गर्ने दबाब सिर्जना गरे। हङकङ र ताइवानलाई चीन बिरुद्ध भड्काउने प्रयास गरे र हाल आमने–सामनेको लडाईँको कुरा भइरहेको छ।
तर, स्वयं अमेरिका भित्रबाट जुन रिपोर्ट बाहिरिएको छ, त्यो अमेरिकाका लागि राम्रो छैन । किनकी स्वयं अमेरिकी रक्षा विभागले चीनसँगको लडाईँ घाटाको व्यापार भएको मान्दै आएको छ । के बास्तवमै अमेरिका आफ्नै रक्षा विभागको बिरुद्धमा गएर चीनसँग युद्धको जोखिम उठाउन सक्ला त वा चीनलाई पाठ सिकाउनका लागि अन्य मार्ग रोज्ला ? यसको आशा धेरै देखिएको छ।
पहिले अमेरिकाले चीनमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगायो र हाल उसले चीनबाट आउने जाने सबै उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। यद्यपि चीनकातर्फबाट यो फैसलामाथि कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । यो दुई देशबीच १९८० मा भएको हवाई यात्रा सम्झौताको उल्लंघन हो ।
कोरोनाभाइरसले अमेरिकामा तबाही मच्चाएको छ र विश्वभरीमै आर्थिक रुपमा मजबुत हुँदै गएको चीनलाई कमजोर गर्न ट्रम्पले लगातार बेइजिङमाथि आक्रामक रवैया अपनाउदै आएका छने । ट्रम्पले चीनमाथि गलत किसिमबाट विश्वको अर्थव्यवस्थामा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन् । साथै हङकङ–भियतनाम तथा भारतसँगको सीमा विवादको विषयमा चीनको बिरुद्धमा उभिने सबै किसिमका प्रयास गरेका छन् ।
ताइवानतर्फ बढ्दै गएको चीनको पंजा अमेरिकी हितका लागि खतरा साबित हुन सक्छ । पेन्टागनको रिपोर्ट अनुसार यदि चीनले ताइवानमाथि हमला ग-याो भने अमेरिकाले पनि ताइवानलाई बचाउन सक्दैन । यो मात्रै होइन प्रशान्त महासागरमा अमेरिकाको महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा गुआम पनि खतरामा आउन सक्छ । अमेरिकाका लागि गुआमा सामरिक दृष्टिकोणबाट धेरैनै महत्वपूर्ण रहेको छ । किनकी यहाँ अमेरिकाको सबैभन्दा खतरनाक र आधुनिक लडाकु विमान बी–२ बम्बर तैनाथ गरिएका छन् ।
तर यो गुआम द्विप चीनको ब्यालेस्टिक मिसाइलको पहुँचमा रहेको छ । चीनले ताइवानमाथि दबाब बढाउन सुरु पनि गरेको छ । चीनले ताइवान नजिकै रहेको समुद्री क्षेत्रमा हालसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास पनि गरेको छ ।
अर्कातिर चीनलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनलाई ताइवानमा हमला रोक्नका लागि ट्रम्पले सुपर–डुपर मिसाईल तैनाथीको धम्की पनि दिएका छन् । विद्यमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै अमेरिकी रक्षा विभागले आफ्नौ सबैभन्दा महत्वाकांक्षि सैन्य प्रोजेक्ट अर्थात हाइपरसोनिक मिसाइले प्रविधिमा काम सुरु गरिसकेको छ ।
कस्तो छ अमेरिकाको सुपर–डुपर मिसाइल ?
ट्रम्पको मिसाइल आवाज भन्दा १७ गुण तीव्र गतीमा हमला गर्न सक्छ । यो विश्वकै हालसम्मकै तीव्र गतीको मिसाइल हुने छ ।यो क्रुज र ब्यालेस्टिक मिसाइल दुवैको विशेषताबाट सु–सज्जित हुने छ । यसले लन्च गरेपछि पृथ्वीको कक्षबाट बाहिर गएर टारगेटलाई निशाना बनाउछ । हाइपरसोनिक मिसाइलको तीव्र रफ्तारका कारण राडारले यसलाई पक्रन सक्दैन । यसले ब्यालेस्टिक र क्रुज मिसाइलबाट फर्केर आफ्नो दिशा पनि फेर्न सक्छ । रुसले आवाजको गती भन्दा पाँच गुणा र चीनले ६ गुण तीव्र गतीको मिसाइलमा काम गरिरहेका छन् ।
तर बिना तयारी यो हाइपरसोनिकको घोषणा गर्नु अमेरिकाको शक्तिको नभएर उसको डर मात्रै प्रतिविम्वित भएको छ । चीनले पछिल्लो समयमा चोरिछिपि आफ्नो शक्तिमा वृद्धि गरिरहेको भान अमेरिकालाई भएको छ । पेन्टागनको रिपोर्टका अनुसार एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा हालको अवस्थामा लडाईँ गर्नु अमेरिकाका लागि हार बेहोर्नु बराबर हो । त्यसैले ट्रम्पको सुपर–डुपर मिसाइलको घोषणाले अमेरिकाले चीनमाथि दबाब कायम राख्न सक्ने दावी जानकारहरुको छ । ट्रम्पको यो चतु-याई सर्प पनि मरोस् र लाठि पनि नभाचियोस् भन्ने रहेको जानकारहरुको रहेको छ । कारोबार दैनिक